Badger amafutha - azikho contraindications ukusetshenziswa
Indlela Izimbila amafutha, lapho amacala kuyasiza, kungaba esikhundleni izidakamizwa ezibizayo? On mibuzo neminye, sizozama ukunikeza izimpendulo. Namuhla abantu abaningi bayimilutha izindlela non-bendabuko yokwelashwa. Ngakho umbuzo - indlela baphuze Izimbila amafutha, kuyinto efanele. On ngezici zawo zokwelapha, abaningi bangase nizwile kusukela ebuntwaneni.
Ngokwami, ngiye ngezwa ukuthi usebenzisa leli thuluzi, welashwa isifo sofuba. Yiqiniso, kufanele wazi futhi khumbula ukuthi ngaphezu izakhiwo ewusizo, izindlela non-bendabuko yokwelashwa alusebenti njalo. A kungenzeka, kukhona Izimo ukusetshenziswa yabo. Ezinye kumasayithi e-internethi ngokuqiniseka ukuthi amafutha Izimbila ayinakho Izimo. Ingabe kuyiqiniso lokhu?
Ake namanje kuqale izinkomba ukusetshenziswa kwaleli thuluzi futhi sizobe ukukhuluma kabanzi mayelana izakhiwo zalo. Kodwa amahwahwa Izimbila ngempela iye yasetshenziswa ngempumelelo isikhathi eside, hhayi nje kuphela ezweni kuphela kodwa futhi imithi. I sekushiwo ukuthi ingane wezwa ukuthi amafutha Izimbila uswidi sofuba. Kamuva, ngenkathi ngitadisha esikoleni sezokwelapha, lezi amahemuhemu eye yaqinisekiswa.
othisha wethu wasitshela ukuthi amafutha Izimbila, ngaphezu sofuba iphathwa ngempumelelo kanye nezinye izifo yamaphaphu, izilonda esiswini, izilonda duodenal kanye nezinye izifo. Wathi eziningi acid adingwa umzimba, equkethe amanoni Izimbila. Izimo kule ngempela cishe lingekho.
Amafutha equkethe okuningi izinto eziwusizo buthelela yasendle ngaphambi ukuwela basebusika. Kuyinto lezi reserves ukuvumela izilo ukuze usinde basebusika ngaphandle umonakalo empilweni. acid polyunsaturated, unsaturated acid okunamafutha, amaminerali, amavithamini ku Izimbila amafutha. Izimo Yiqiniso, cishe wonke umuntu unendlela, kodwa acid oshiwo ngenhla zinengxenye umzimba ngisho sokumisa ukuthuthukiswa izimila ebulalayo.
Uxwayisa zokugula oncologic futhi eziqukethwe amafutha Izimbila Vitamin A. Kufanele wamukele ukuthi ezinye zalezi izifo ngokuvamile musa ukuphulukisa iminyaka, futhi ngezinye izikhathi ezinhle futhi non-akukho. Mhlawumbe esikhundleni kokuchitha izidakamizwa amazwe imali eningi, kuwufanele ukuzama Izimbila amafutha?
Izimo ukusetshenziswa kwalo - lokhu ikakhulukazi njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, isifo sesibindi futhi isici esiyingqayizivele of izinto eziqukethwe umkhiqizo. Njengoba kubonakala, umkhawulo ukusetshenziswa azinakwa. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngaphambi kokuthi aphathe lokhu kusho izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha kungcono ubonane nodokotela wezingane. Yiqiniso, abadala kufanele futhi asilalele lesi seluleko futhi uthintane nge onguchwepheshe kusukela umuthi olusemthethweni.
Ukwamukela izimali ngaphakathi, Izimbila amafutha Kunconywa ukuba uthele hot umhluzi Hypericum noma wavuka okhalweni. Indlela kanye ukumnika yamakhambi. Ewusizo kakhulu uma hlanganise ezimibalabala uju Izimbila amafutha. Izimo kuleli cala kumele labakhona nalabangekho, ukusetshenziswa uju (ie komzimba, le ndlela yokwelashwa akulungile). Kwemithi enjalo kudingeka uthathe izicucu ezintathu fat futhi omunye uju. Lokhu kuqhathaniswa kufanelekile ukuxuba lo mkhiqizo kwezokwelapha nge okusajingijolo ujamu. Le nhlanganisela uphelele izingane. Bahlanza phansi ubisi olufudumele. Zigwinye kudingeka ezilishumi nane ngokuvumelana sihloko. Faka isipunu 3p x / ngosuku ngaphambi kokudla for isigamu sehora. Ngemuva kwamasonto amabili okuqala ukwelashwa enjalo kokushintshela umthamo owodwa. Izingane ezithathwe ekuseni ngaphambi kokudla dessert spoon, abadala - egunjini lokudlela. Le ndlela yokudla kubhekwa yakudala.
Badger amafutha isetshenziswa kanye njengendlela agent yezimonyo. Uma wenza buso, okuhlanganisa Izimbila amafutha, ngoba ubuso kanye decollete, ke kakhulu ngcono ibala lesikhumba. abesifazane abaningi bathi isikhumba sabo kuyinto ngezicabha ngakho. Sifisela wena impilo enhle!
Monocytes encishisiwe - the harbingers yesifo
Izingane Night Lights - Pawn eqinile isimiso sezinzwa futhi amaphupho amnandi